मासु उडान: वर्णन, लार्भा, जीवन काल सबैका लागि उपयोगी जानकारी।
मासु मक्खी: विवरण, लार्वा, जीवन अवधि
माछा डिप्परन्सको क्रमसँग सम्बन्धित छ, जसमध्ये विश्वमा एक सय पचास हजार भन्दा बढी प्रजातिहरू छन्। र ती मध्ये केवल केही संक्रमणका वाहकहरू हुन्, तिनीहरू मध्ये अधिकांश एकदम हानिरहित छन्, पुतली जस्तै। त्यसोभए कुन झिंगाहरू होसियार हुनुपर्छ? र किन ती मध्ये कति पतनको लागि यति उदासीन छन्? र किन कोहीले फूल र फलहरू मन पराउँछन्?
मासु परिवार उड्छ
यस परिवारमा दुई हजार भन्दा बढी प्रजातिहरू सामेल छन्। तिनीहरू मुख्यत: उत्तरी गोलार्द्ध, समशीतोष्ण जलवायुको क्षेत्रमा पाइन्छन्। तातो मौसम मा त्यहाँ धेरै छैन।
प्राय जसो मासु उडानमा खरानी रंगको हुन्छ, तर अन्य रंगहरू पनि फेला पर्दछन्। केही प्रजातिहरू ठुलो ठूला हुन्छन्, तिनीहरूको लम्बाई दुई सेन्टिमिटरभन्दा बढीसम्म पुग्न सक्छ, तर त्यहाँ साना पनि छन् - छ मिलिमिटर भन्दा बढी। यी झिंगाहरूको लार्भा सामान्यतया सडेको मासु वा अन्य जीवहरूमा विकास हुन्छ। त्यहाँ मासु झिंगाहरू छन् जसले अन्य कीडे, घाइते पशुहरू र मानवमा समेत अण्डा पार्दछन्।
त्यहाँ जीवित-मासु उड्नेहरू छन् जुन क्षय भएको लासमा लार्भा राख्छन्।
केही व्यक्ति गल्तीले मासु उडानको लागि नियमित हाउसफ्लाइ लिन्छन्, तर यो सत्य होइन। हाउसफ्लाइ एकदम सानो छ, र यसले छालामा टोक्ने क्षमता राख्दैन, यसले तरल पदार्थ मात्र खान्छ, र ठोसलाई पहिले लारमा विघटन गर्नुपर्छ।
यस्तो माछाले चिसो सडने वातावरणमा अण्डा राख्न रुचाउँदछ, उदाहरणका लागि, मलमा। एक महिलाले एक पटकमा 120 अण्डा राख्न सक्छ, भाग्यवस, सबै जन्म हुँदैनन्।
हामीसँग रहेको सबैभन्दा सामान्य मासु उडान खैरो, हरियो र क्यारियन हो। यी बरु ठूलो व्यक्तिहरू हुन्, साधारण ईन्डोर भन्दा धेरै ठुलो, व्यक्तिलाई धेरै अधिक समस्याहरूको वितरण गर्न सक्षम हुन्छन्।
खरानी मासु उडान
यो उड़ोलाई सारकोफगस पनि भनिन्छ। उनी कैरियन हुन्। यो ठूलो फ्लाई हो, यसको लम्बाई 25 मिलिमिटरमा पुग्छ। खैरो मासु झिंगाको नामले भने जस्तै चेकर वा लाइनको रूपमा गाढा बत्तीको खैरो र colorको पहेलो सेतो टाउकोको साथ कालो पट्टीले "विभाजित" हुन्छ। रातो र color्गको आँखा, पेटमा सेतो अनुदैर्ध्य रेखा। शरीरको आकार रong्गको छ, पेट ठूलो कम्मर, कपाल खुट्टाले ढाकिएको छ।
खैरो मासु झिंगाहरू एक व्यक्तिको घरमा दुर्लभ पाहुना हुन् र तिनीहरूसँग केही फाइदा हुने नै छ भने मात्र त्यहाँ देखा पर्दछ। यी झिंगाको गन्धको भावना धेरै विकसित छ, र तिनीहरूले एक धेरै ठूलो दूरीमा सडिएको मासु गन्ध गर्न सक्षम छन्। यसबाहेक, तिनीहरूले मासुको सतहलाई मात्र छुनु पर्छ ताकि धेरै साना कीराहरू यसमा तुरुन्तै सर्न सक्छन्।
खैरो मासुको झिंगाको पोथी पोथी हुन्छ र मुख्यतया कैरियनमा लार्भा राख्छन्। तर यस परिवारका प्रतिनिधिहरू छन्, जसको लार्भा सडने फल, मल वा अन्य क्षय गर्ने जीवहरूमा विकास गर्न सक्षम छ। माछाका प्रजातिहरू पनि छन्, लार्भा अन्य जीवित जीवहरूमा परजीवीकरण गर्न सक्षम छन्।
अतिरिक्त आंत पाचन यो उडानको लार्वाको विशेषता हो। कहिलेकाँही उनी अन्य कीराहरूको लार्भामा खुवाउन वा नरभक्षी अभ्यास गर्न सक्षम हुन्छिन्। मासु उडानको लार्भा 10 दिन सम्म क्यारियनमा बस्दछ, जुन पछि माटोमा सर्छ, जहाँ यो क्रिसालिसमा परिणत हुन्छ र त्यसपछि वयस्क उडानमा।
मासु उड्ने प्यूपा हाइबरनेट गर्न सक्छ, उदाहरणका लागि, केहि सार्कोफैगस प्रजातिहरूको पपाले सबै जाडोमा "ओछ्यान" लिन सक्षम हुन्छन् र वसन्तको अन्तमा मात्र वयस्क बन्न सक्छ।
मासु उडान फूलको अमृत खान्छ, र एकै समयमा तिनीहरूलाई परागकण गर्दछ, यसको कडा खुट्टामा पराग स्थानान्तरण।
खैरो मासु झिंगा, र अन्य carrion प्रजातिहरु को लागी, अस्पष्ट हुन सक्दैन। संक्रामक रोगहरूका वाहक हुनाले तिनीहरू एकै समयमा प्रकृतिमा विशिष्ट अर्डरको रूपमा सेवा गर्दछन्। र फोरेन्सिक अनुसन्धानकर्ताहरूले एक क्षयित लाशमा उमेर लार्वाद्वारा मृत्युको समय सेट गर्न सक्षम छन्।
हरियो मासु उडान
यो चमकदार पन्ना र colorको चमकदार पखेटाको सुन्दर उडान हो जसमा हल्का अभिव्यक्त गरिएको ओपनवर्क बान्की रहेको छ। हरियो उडानको लम्बाइ प्राय: 8 मिमी भन्दा बढि हुँदैन। ठूलो रातो आँखा, गोलो पेट र सेतो गालाहरू छन्।
हरियो मासु उडानको बासस्थान सबै प्रकारका ढल निकास, सडदै गइरहेको पशुको लास, मल, फोहोर हो, तर कहिलेकाँही ती फूलहरू सुगन्धित फूलहरूमा पाइन्छन्। खानामा सडने जैविक पदार्थ हुन्छ, जहाँ यसले अण्डा पार्छ।
एउटा महिलाले खैरो वा हल्का पहेंलो रंगको लगभग 180 अण्डाहरू राख्न सक्षम छ, जुन उनले सकेसम्म गहिरो क्यारियनमा लुकाउन खोज्छिन्। लार्भा 6-48 घन्टामा जन्मन्छन् र9दिनको लागि त्यहाँ विकास गर्न जारी राख्छ। त्यसपछि, तिनीहरू क्रिसालिसमा परिणत हुन माटोमा सर्छन्। मौसम स्थितिको आधारमा, वयस्क फ्लाई 10-17 दिन भित्र फार्म हुन्छ।
फ्लाईको लार्भा - अनुप्रयोग
सेतो मैग्गटहरू, ए angle्गलरहरू बीच यति लोकप्रिय, ठीक मासु उड्ने लार्भा हो। केहि माछा मार्ने उत्साहीले तिनीहरूलाई आफैंमा लैजान्छन्, सडेको मासुको टुक्राहरू राखेर। तर धेरैले अझै उनीहरूलाई स्टोरमा किन्न रुचाउँछन्, जस्तै "खेती" मा एक खास गन्ध छ, जसले सामान्यतया मानिसहरूलाई कृषि उत्पादनबाट जोगाउँदछ।
त्यहाँ धेरै प्रकारका म्याग्जोटहरू छन्:
Maggot निलो carrion उडान ले larvae हो। तिनीहरू सडेको मासुमा वा माछामा विकास गर्दछन्, र केही मिनेट उड्न गन्धमा उड्नका लागि पर्याप्त हुन्छ। यी Maggots 15 मिमी को लम्बाई मा पुग्छ।
गोजजर कालो टाउकोको मासु उडेरको लार्वा हो। आकारहरू 20 मिमी सम्म पुग्छ र धेरै छिटो पुप्पल चरणमा जान्छ।
गोर्डिनी - खैरो मासु उडेरको लार्भा, 25 मिमी बढ्छ, pupate धेरै चाँडै।
पिन्का हरियो मासु उडानको लार्वा हो। सानो म्याग्गोटहरू, आकार 10 मिमी भन्दा बढि हुँदैन।
फिफा लुसिलिया प्रजातिको फ्लाईको लार्भा हो। फ्रन्स्ट-प्रतिरोधी म्याग्गटहरू 12 मिमी लामो हुँदैन।
माछिको बारेमा माथिका सबै तथ्यहरू पढ्दा, पूर्ण तार्किक प्रश्न उठ्छ: "साधारण उडान कति दिन बाँच्दछ?" प्राय: एक महिनाको बारेमा, र उनको सम्पूर्ण जीवनमा उनी 500 अण्डा भन्दा बढी राख्न सक्षम हुन्छिन्। झिंगाहरूको केही प्रजातिहरू2हजार अण्डाहरू सम्म राख्छन्। यदि हरेक लार्भा एक वयस्कमा जीवित छ, तब तेस्रो पुस्तामा झिंगाले सम्पूर्ण विश्व भर्नेछ। भाग्यवस, एक अपेक्षाकृत थोरै प्रतिशत बाँचे, जुन, यस बीचमा, वरिपरिका सबैलाई पर्याप्त समस्या प्रदान गर्न सक्षम छ।
आमन्त्रित अतिथिहरूसँग झगडा गर्दै
कानमा मुनिको भुईंले तुलनात्मक असुविधा मात्र पैदा गर्न सक्छ, तर यो एक खतरनाक रोगको वाहक पनि हो। तिनीहरूले दुबै खाना संक्रमित गर्न सक्छन् र मानव रगतमा सीधा संक्रमित गर्न सक्छन्। क्षयरोग, टाइफाइड ज्वरो, हैजा केही प्रकारका रोगहरू हुन् जुन झिंगाले व्यक्तिलाई स can्क्रमित गर्न सक्छ।
उनीहरूसँग व्यवहार गर्ने आधारभूत सिद्धान्त सफा राख्नु हो। जे भए पनि, पहिले नै उल्लेख गरिएझैं, झिंगाले राम्रोसँग खानाको गन्ध लिन्छ र यसमा ठ्याक्कै उड्दछ। नियमित रद्दीटोकरीको बिन खाली गर्नुहोस्, घरपालुवा जनावरहरू पछाडि सफा गर्नुहोस्, खाना नखोल्नुहोस्, विन्डोजहरू सुरक्षात्मक जालहरूले सुसज्जित गर्नुहोस् - यी साधारण तरिकाहरू हुन् जुन व्यक्तिको जीवनलाई सजिलो बनाउन सक्छ।
वास्तवमा, सामान्य उडान कति लामो समय सम्म बाँचिरहन्छ, यसले हाम्रो छोटो शताब्दीमा हामीलाई धेरै समस्याहरू निम्त्याउन सक्छ। रोगको वाहक नै नहुँदा पनि यो अत्यन्तै कष्टकर हुन सक्छ किनकि उनीसँग यहाँ स्वागत छैन भन्ने बुझ्ने पर्याप्त अन्तरदृष्टि छैन, र अझ शान्तिमय ठाउँ खोज्न। जे भए पनि तपाईले उनलाई जति पटक पीछा गर्नुहुन्छ, ऊ फेरि र फेरि आउनेछ।
थप रूपमा, कोठा वरिपरि उडान, उनले आफ्नो स्रावका साथ सबै चीज चिन्ह लगाउँछिन्। वैज्ञानिकहरूको अनुमान छ कि एक उडान कम्तिमा पचास विभिन्न ठाउँमा "मार्क" गर्न सक्षम छ। र ती प्रत्येक जीवाणुहरूको वास्तविक केन्द्र हो। त्यसैले झिंग्न विरूद्ध लड्न, "स्वच्छता स्वास्थ्यको लागि महत्वपूर्ण छ" भन्ने नियमले पहिले जस्तो काम गर्दैन।
खैर, मासु उडान मात्र होईन, तर साना मिज, खुला हावामा दिक्क लाग्ने, पनि गम्भीर रोगहरूको कारक एजेन्ट हुन सक्छ। यसले विभिन्न कन्जुक्टिवाइटिस निम्त्याउँछ र धेरै आन्द्रा रोगहरूको कारण हो।
पोस्ट समाचार र सोसायटी
22 सेकेन्डमा उत्पन्न डाटाबेसमा 0,347 प्रश्नहरू।